OSN Good Second Phone မျိုးစုံ ရောင်း/ဝယ်/လဲ အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
OSN Good Second Phone မျိုးစုံ ရောင်း/ဝယ်/လဲ
ရောင်းချသူ: Oscar Oscar
ကိုအော်စကာ (မြောက်ဒဂုံ ၇/၈ ဂိတ်ဟောင်း )
Hotline - 09252984759
Phone - 09795652239 / 09977990568
Phone - 09441072331 / 09441074229
ဘာလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားရုံပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းပဲတိုက်ရိုက်
ဆက်ပေးပါဗျ ။ Comment / Chat Box မကြည့်အားလို့ပါ ။
Galleryအပြည့်စုံ တင်ပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ .
23 .5.2018 အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေ ။
ဒီတစ်ခါ Second Phone သန့်သန့်လေးတွေရောင်းမယ်ဗျ ။
Post တင်မရောင်းဖြစ်တာတော်တော်ကြာနေပြီနော် အမျိုးတွေ ။
ဒီကနေ့ အဖို့ကတော့ Huawei Day ပါပဲ ။ Huawei လေးတွေ
များမယ် ခင်ဗျ ။ ပြီးတော့ apple product တစ်ချို့ရယ် ၊
လူကြိုက်များတဲ့ Mi/Oppo/Vivo လေးတွေရယ် ပါမယ် ကဲ
ကြိုက်ရာယူစေဗျာ ။ ထုံးစံအတိုင်း error အာမခံပေးပါတယ်ဗျ ။
Huawei Product and One Plus ………
1 . One Plus 5t . Matte Black . 99.9% အသစ်တိုင်းပဲ
Or Box and Accessories . Any Call Showroom Warranty 8 လကျန်သေးတယ် ။ No Error ရှယ်လေး ။
FLAGSHIP Killer ဆိုလားဘာလားနော် ။
Ram 8 / Rom 128 နဲ့ သူ့လောက်မြန်တဲ့ဖုန်း ကျွန်တော် မသုံးဖူးသေးဘူး ။
Price - 550,000/- ပဲ တန်တန်လေးပါ ။
1 . Huawei P10 . 4/64 . နာမည်ကျော် Leica Dual Camera ကိုမှ 20mp /12mp နဲ့ SUMMARIT-H 1:2.2/27 ASPH နော် လက်ရှိ အချိန်အထိ ကင်မရာ
အကောင်းဆုံးဖြစ်နေဆဲ ။ 97% အသန့်လေးပဲ ။
Showroom Warranty7လကျန်Or Box and Acc .
Price - 335,000/-
2 . Huawei ရဲ့ နာမည်ကျော်ဖုန်းကြီး Mate9ပါ ။ 99%
Champange Gold . အလုံး အရမ်းသန့်တယ် ။ သူကတော့
4/64 . တစ်ကယ့် အကောင်းစား ဖုန်းကြီးပါဗျ ။
Leica Dual Camera ပဲ 20mp/12mp ဗျာ စွန်းကြမ်း ။
Phone Only နဲ့ Cover ပဲပါမယ် ။ အနာအဆာ အပွန်းအစင်းလုံးဝမပါ ။
Price - 345,000ks
3 . Huawei Y9 2018 . 100% အသစ်ဝယ်သလိုသန့်တယ်ဗျ
သူလဲ 18:9 Ratio ကို Dual Camera နဲ့ပဲ တော်တော် စွမ်းတဲ့ Mid Range လေးပါပဲ ။ 3/32 (Black) ။ Original Box and Accessories . Showroom Warranty Full
Price - 200,000ks အသစ်ထက်6သောင်းသက်သာသွားမယ်
4 . Huawei G7 Plus လေး အလုံးသန့် No Error လေးပါဗျ
3/32 . Finger / Camera good ပါ ။ Original Battery
အသစ်ပြန်လဲပေးထားမယ် ။ Error အာမခံပြီး ရောင်းပါတယ် ။
Phone Only . Battery လုံးဝ Ok သွားမယ်နော် ။
Price - 120,000ks
Apple Product ………
1 . iphone7Plus . Matte Black . 98% . အသန့်ကြီး ။
ZP/A . 256GB အမြင့်ဆုံးပဲ ။ Or Box and Acc ပါမယ် နားကြပ်မကောင်းပါ ။ Battery Camera စွန်းကြမ်း ။
Error7ရက် စမ်းသုံးပါခင်ဗျ ။ ရှယ်ကြီးကို ရှယ်ဈေးနဲ့ပေးမယ် ။
Price - 740,000/-
2 . ipad air . Gray . 99% အလုံး အရမ်းသန့်တယ် ။
16GB . wifi only . ပေါ့ပါးပြီး အရမ်းသုံးလို့ကောင်း ။
Game / fb ရှယ် ။ Camera / Battery လည်းရှယ် ။
ipad (ONLY) ပါမယ် ။ No Error ။
Price - 220.000ks
3 . ipad mini . Silver . 99.9% . 32 GB . wifi only
No Error ။ No Damage ။ Speaker ဘာညာ ရှယ် ။
Cover အသန့်လေးပါပေးမယ် ။ ipad Only .
Price -155.000ks ။
4 . ipad mini . Grey . 32 gb . 96% . အသန့်လေးပါ ။
Orပတ်လည်လေးပဲ ။ မှန်မှာ အပွန်းစင်းလေးတွေရှိတယ် ။
No Error . Battery ရှယ်ခံ ။ ipad Only .
Price - 140,000ks .
5 . ipod 4th gen ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလေး ။ 95%
wifi / bluetooth / camera / battery အားလုံး လုံးဝ OKတယ်ဗျာ ။ နောက်ဖုံး ရှယ်ပွန်း ။ ipod ရယ် or charger ရယ်ပါမယ် ။ Music လုံးဝ အလန်းဇယား ။ 8gb memory …
Price - 40000ks .
Xiaomi Product ………
1 . Redmi Note 5a . 2/16 . Greyလေး .
Body ရှယ်မသန့် နည်းနည်းလေးလည်းကောက်နေတယ် ။
တစ်ခြားဘာ error မှမရှိပါ ။ Camera စွန်းFineပဲ ။
ဈေးတန်တန်လေးပဲ ရောင်းမယ် ။ တစ်ခြားအယ်ရာ နဲ့ပတ်သတ်လို့
၃ ရက်စမ်းသုံးကြပါ ။
Price - 65,000/-
2 . Mi Note2. Ram6/128GB နဲ့ တစ်ကယ့် ဖုန်းအကောင်းစားလေးပါ ။ ဒါပေမယ့် Displayမှာ ပုံပါအတိုင်း Error ရှိနေလို့
ရှယ်ဈေးလေးနဲ့ ရမယ် ။ လုံးဝ အော်စည်း ။ တစ်ခြား Error လည်းလုံးဝ မရှိပါ ။ Touch လည်း လုံးဝ မလွတ်ပါ ။
Battery / Camera လုံးဝကောင်းတယ် ။
Phone Only ။ Cover ပါတယ် ။
Price -160,000ks နောက်ဆုံးဈေးလေးပါဗျ ။
OPPO Product and Others ………
1 . Oppo F5 . 4/32 . Black . 99.9% အသစ်တိုင်းသန့် ။
နောက်ဖုံးဘာညာ လုံးဝရှယ်သန့်တယ် ။ Origianl Box and Accessories . Showroom Warranty လည်း 10 လကျော်ကျန်သေးတယ် ။ ကဲဈေးကလည်းတန်နေရမယ် ။ ဘာလိုသေးလဲဗျာ ။
Price - 250,000/-
2 . Oppo F5 Youth . 3/32 . Black . 99% Bodyလုံးဝရှယ် ။နောက်ဖုံးမှာ Matte Black အစဉ်အလာ ဗျောက်ကလေးတွေရှိတယ် ။ Original Box and Accessories ။
Showroom Warranty9လကျန်တယ်နော် ။
Camera / Finger / Face unlock အထူးပြောနေစရာ
လိုမယ်မထင် ။ Cover အလန်းလေးပါပေးမယ် ။
Price - 215,000/-
3 . Vivo ရဲ့ ခုချိန်မှာ ကွက်ပျောက်သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ တစ်ချိန်တုန်းက High End လေး ။ ဒါမျိုး အသန့်လေးက လုံးဝ ရှားပါးစာရင်းဝင်နေပါပြီ ။ X5Pro . ပုလဲဖြူရောင်လေး လှမှလှ ။
အံ့ဖွယ် All Original Box and Accessories ပါတယ်နော်
Or စည်း ။ Super Amoled Display နဲ့ ဆိုတော့ကာ
Resolution အရမ်းလှ ။
Price - 130,000/-
ဒါလေးကတော့ ဓါတ်ပုံဝါသနာပါသူတွေ အတွက် ရေမီးအစုံလေး
Nikon Camera လေးပါ ။ Bag / Rechargeable Batteries / Charger / Tripod / Micro SD
အကုန်ပေးမှာ ။ No Error ။
65,000/- ပဲ ပေးဗျာ အရမ်းတန်ပါတယ် ။
အမည်: OSN Good Second Phone မျိုးစုံ ရောင်း/ဝယ်/လဲ